म्याकमा फोटोहरूमा भिडियोको साथ म के गर्न सक्छु? | म म्याकबाट हुँ
म्याकमा फोटोहरूमा भिडियोको साथ म के गर्न सक्छु?
जेभियर पोर्कर | | ओएस एक्स एल कैपिटन, म्याक प्रोग्रामहरू, ट्यूटोरियलहरू
नेटिभ म्याक अनुप्रयोगहरूले हामीलाई हाम्रो फाईलहरूको साथ धेरै प्रकारका प्रकार्यहरू गर्न अनुमति दिन्छ, हाइलाइट गर्दै सरलता र छिटो र सजिलो सम्पादन एक फाईल, फोटो वा भिडियो को, एक विशेष कार्यक्रम को साथ काम पूरा गर्न को लागी सम्भव भएमा आवश्यक छ भने।
फोटो अनुप्रयोगले तपाईंलाई फोटोहरू र भिडियोहरू भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ एल्बमहरू सिर्जना गर्न, आईक्लाउडसँग सिnch्क्रोनाइज गर्न र तिनीहरूको सानो संस्करण बनाउँन।। भिडियोको मामलामा, यसले हामीलाई केवल उनीहरूलाई अवलोकन गर्न अनुमति दिँदैन, तर निम्न समायोजनहरू पनि गर्न दिन्छ। फोटोहरू खोल्नुहोस् र हामी त्यसलाई देख्छौं।
यसको अवधि छोटो पार्नुहोस्: भिडियोमा क्लिक गरेर, प्ले बार, भिडियो अवधि, आदि अर्ध-पारदर्शी खैरोमा देखा पर्दछ। क्विकटाइमबाट हामीलाई थाहा छ बारमा समान। यस पट्टीको शीर्ष दायाँमा, तपाईं फेला पार्नुहुनेछ घडी गियर प्रतीक। यसलाई थिचेर, विभिन्न विकल्पहरू देखा पर्दछ। पहिलो हो "छोटो"। यो विकल्प छनौट गरेर, खैरो पट्टी एक प्रकारको भिडियोपटक हुन्छ जुन पहेंलो रेखाले घेरिएको हुन्छ। दायाँ र बायाँ अन्त मोटा छ र या त एक मा क्लिक गरी र तान्दै, हामी भिडियो छोटो बनाउन वा लामो गर्न सक्छौं हाम्रो मनपर्दो र हामी सँधै पोइन्ट हेर्नेछौं जहाँ हामी समान स्क्रिनमा छौं। एक पटक यो हाम्रो इच्छा अनुरुप, हामी शर्टनमा क्लिक गर्नेछौं र भिडियो तयार हुनेछ।
फ्रेम अग्रिम बटनहरू देखाउनुहोस्: यसले हामीलाई एकै साथ अगाडि / पछाडि बटनहरू: फ्रेम द्वारा फ्रेम वा अग्रिम गति: x2, x5, x10, x30 लाई अनुमति दिन्छ।
पोस्टर फ्रेम: यो भिडियोको लागि एक आवरण माना assign्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ। पूर्वनिर्धारितद्वारा फोटोहरू पहिलो प्रयोग गर्दछ। यो गर्नका लागि, हामी भिडियोलाई फ्रेमको ठ्याक्क स्थितिमा राख्छौं जुन हामीले आवरणको रूपमा चाहन्छौं र "सेट पोस्टर फ्रेम" को रूपमा क्लक गियरमा फेला परेका विकल्पमा क्लिक गर्नेछौं। यदि हामी बाहिर गयौं भने हामी यो चित्रलाई पोस्टरको रूपमा देख्नेछौं।
छवि को रूपमा फ्रेम निर्यात गर्नुहोस्: भिडियोको फोटो प्राप्त गर्न प्रयोग गरियो। (हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि सामान्य रूपमा भिडियोको तस्विर भन्दा कम गुणस्तर हुन्छ र प्राप्त गरेको यस फोटोको नराम्रो गुण हुनेछ)। हामी फ्रेममा जान्छौं, गियर थिच्नुहोस् र विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् "छवि को रूपमा फ्रेम निर्यात गर्नुहोस्"। महत्वपूर्ण: यो छवि हाम्रो हार्ड ड्राइवमा छवि फोल्डरमा निर्यात गरिने छ र अनुप्रयोगको फोटो ट्याबमा होइन।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » म्याकमा फोटोहरूमा भिडियोको साथ म के गर्न सक्छु?
के एप्पलको सेप्टेम्बर कीनोट निमन्त्रणा यस हप्ता मिडियामा हिट हुनेछ?
किन आईफोन केबल सधैं विच्छेदन गर्दछ?